Fanambarana 08 oktobra 2018 - Cercle de Réflexions des Économistes de Madagascar
Publié 8 octobre 2018 rado
Tonga eto amin’ny kihon-dalana indray ny firenentsika ankehitriny hisafidianantsika izay ho mpitondra ny firenena mandritry ny dimy (5) taona ho avy. Raha toa ka tafalatsaka tanteraka ao anatin’ny fahantrana mangitsokitsoka ny ankamaroan’ny Malagasy etsy andaniny, eo ihany koa ireo mpanefohefo vitsy anisa miaro ny tombotsoany ka manohana tanteraka ireo mpanao politika mpandainga mpitady seza etsy ankilany.
Ato anatin’ny fotoanan’ny fampielezan-kevitra tanteraka isika amin’izao fotoana izao. Miezaka manao ny fomba rehetra ireo mpanao politika kandidà amin’izany fifidianana filoham-pirenena izany mba hampadaniana azy ireo. Miisa enina amby telopolo (36) izy ireo, iray ihany anefa ny seza azo omena. Ny fampielezan-kevitra mandritra ny fifidianana toy izao dia fotoana izay entin’ny kandidà handresena lahatra ny mpifidy. Ny tantara anefa dia mampahafantatra antsika fa tsy nisy fampielezan-kevitra niorina tamin’ny foto-kevi-pampandrosoana teto Madagasikara. Ary raha sendra nisy aza izany dia foto-kevitra tsy nahomby teo amin’ny famongorana ny fahantran’ny Malagasy fa teny midina tsy nangalàna ny hevitra taminy akory ka lasa kobaka am-bava nentina nitadiavan-tseza fotsiny ihany. Noho ireo anton-javatra ireo dia tsy kisendrasendra fa safidy ny maha-manampahaizana manokana anay momba ny fihariana sy ny fampandrosoana. Koa amin’ny maha olom-pirenena anay dia mahatsapa izahay fa manana andraikitra ho amin’ny fampandrosoana ny ara-toe-karena sy ny maha-olona eto amin’ny firenentsika. Izany indrindra no antony nanaovanay ny loa-bary an’dasy ara-toe-karena, nangalàna ny hevitr’ireo manam-pahaizana Malagasy isan-tsokajiny sy ireo vahoaka nandray anjara tamin’ny adihevitra. Izy ireo no iharan’ny fahantrana mivantana. Lohahevitra tamin’izany ny fepetra tsy maintsy tanterahina ho fampandrosoana ny ara-toe-karena eto Madagasikara. Isaorana ireo rehetra nifanome tanana taminay tamin’izany. Ankehitriny, narafitray sy novolavolainay ho boky izany ho tondro amin’ny izay fanamby ho tratrarin’ireo izay mikasa hitondra indray ny firenentsika rahampitso satria:
Tsy vitanay mpahay toe-karena Malagasy mivondrona ato amin’ny CREM ny mijery fotsiny ny firenentsika ho farahidiny maneran-tany eo amin’ny lafiny toe-karena ;
Tsy vitanay ny mijery fotsiny ireo fandanindaniana mihoampampana an’ireo harenantsika (na an-kibon’ny tany na an-dranomasina) ho tombo-tsoan’olom-bitsy (na vahiny na teratany Malagasy) ;
Tsy vitanay ny mijery fotsiny ireo fitrosana manandevo ny taranaka faramandimby izay mbola ho avy nataon’ireo mpitondra nifandimby teto amin’ny firenentsika ;
Tsy vitanay ny mijery fotsiny ny ankamaroan’ny mpiara-belona amintsika iharan’ny tsy rariny sy ny tsindry hazo lena noho ny tsy fahaizana sy ny tsy fahalalàna ary ny fahantrana ;
Tsy vitanay ny mijery fotsiny ny ankamaroan’ny Malagasy tsy an’asa na miasa tsy zarizary ;
Tsy vitanay ny mijery fotsiny ny mpiray tanindrazana tsy salama fa marefo noho ny tsy fahampian-tsakafo ary miaina ao anaty fitaintainana noho ny tsy fandriam-pahalemana.
Noho izany indrindra no hanaovanay izao antso avo manaraka izao:
Manolotra am-panetren-tena sy an-kalalahana ho an’ny Malagasy rehetra ny vokatry ny fikaonan-doha tamin’ny loa-bary an-dasy ara-toe-karena ;
Manolotra izany volavolan-kevitra izany an-kitsim-po ho an’ireo kandidà 36 tsy an-kanavaka izahay ato amin’ny faribolana mpandinika ny hary sy ny fihariana eto Madagasikara ho tondro entin’izy ireo mandrafitra ny vinavinam-pampandrosoana ara-toe-karena kasain’ny tsirairay avy amin’izy ireo hatao ;
Tsy manohana kandidà manokana ny CREM mandritra izao fampielezankevitra izao, fa misokatra kosa ny adihevitra ami’izay rehetra vonona hiara miasa aminay eo amin’ny fandrafetana politika ekonomika
Mirary fitoniana feno ho an’ny firenentsika mandritra ny fampielezan-kevitra sy ny fifidianana izahay ;
Mirary fitoniana feno sy famindram-pahefana mendrika ny hasin’ny firenentsika ao aorian’ny fifidianana ny CREM ;
Mizara ny fanantenana ho an’ny vahoaka Malagasy rehetra fa mbola azo atao ny mampandroso ny firenentsika araka ny tokony ho izy raha mifanaraka sy mifanaja tsara ny mpitondra sy ny vahoaka entina.
Aoka izay ny fanaovana kobaka am-bava sy fampanantenana poak’aty amin’ny fampielezan-kevitra fa aoka tena hifototra amin’ny foto-kevitra amin’ny fandresena ny fahantrana ny fifandresan-dahatra ;
Aoka izay ny fanaovana andrankandrana ny firenena sy ny vahoaka Malagasy amin’ny alalan’ireo tetikady tsy voahevitra fa manara-drenirano fotsiny an’ireo mpamatsy vola noho ny fitiavan-tena tafahoatra ;
Aoka izay ny fanaovana antoka ny tanindrazana amin’ireo vahiny nohon’ny tombon-tsoa manokana ;
Aoka izay ny fanaovanareo mpanao politika ny Malagasy ho toy ny zavatra na zaza fa aoka ny Malagasy tsy an-kanavaka ho raisinareo ho mpiara-miombon’antoka amin’ny fampandrosoana ny firenentsika.
Fotoana izao ho amin’ny ady hevitra marina ho amin’ny tena fampandrosoana ny firenena rahampitso.
Fotoana izao hampisehoan’ireo kadindà sy ny mpiara-dia azy fa tsy mila T. Shirt na fanomezana samihafa mandalo noho ny fifidianana ny Malagasy, fa kosa :
Fotoana izao hampisehoan’ireo kadindà sy ny mpiara-dia aminy amin’ny vahoaka Malagasy fa mila foto-kevitra sy laharam-pahamehina mazava hialàna amin’ny tsy fananana asa, ny tsindry hazo lena, ny kiantranoantrano, ny gaboraraka, ny tsy maty manota sy ny fahalovana ary ny fitantanana tsy mangarahara tsy mahomby.
Fotoana izao hampisehoan’ireo kadindà sy ny mpiara-dia aminy fa mila foto-kevitra sy tetikady ary laharam-pahamehana mazava handresen’ny isam-baravarana ny fahantrana ny Malagasy.
Fotoana izao hampisehoan’ireo kadindà sy ny mpiara-dia aminy fa mila foto-kevitra sy laharam-pahamehina mazava hamerenana indray ny hasin’ny fiandrianam-pirenena ny Malagasy.
⟵Mémorandum Forum Economique National du CREM sur le décollage économique de Madagascar